एमालेको १० औं महाधिवेशन: क-कसका लागि हुँदैछ अन्तिम अवसर ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
एमालेको १० औं महाधिवेशन: क-कसका लागि हुँदैछ अन्तिम अवसर ?
२०७८ मंसिर ७, मंगलवार ०५:०२:००
काठमाडाैं । नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशन आउन अब तीन दिनमात्रै बाँकी छ । मंसिर १० गते सुरु हुने महाधिवेशनमा पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्मका आकांक्षी मध्ये अधिकांशले घोषणा गर्न सकेका छैनन् । सबै अहिले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको इसारा पर्खेर बसेका छन् ।
यो महाधिवेशनलाई एकता र सर्वसम्मतिको महाधिवेशन बनाउने अठोट गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इच्छामा कतै तगारो लाग्छ कि भन्ने डरले व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
वर्तमान अध्यक्ष ओलीसहितका ६ जना नेताका लागि यो महाधिवेशन अन्तिम अवसर भएको छ। गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले विधानमा ७० वर्षे उमेरहद कायम गरेका कारण अध्यक्ष केपी ओलीसहितका ६ जना नेताका लागि अन्तिम अवसर भएको छ । नेतृत्व या पदाधिकारीमा अटाउन सकेनन् भने उनीहरू राजनीतिक जीवनबाट विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ। तीन महिनाअघि महाधिवेशन भएका कारणमात्र ओली एमालेको कार्यकारी भूमिकामा अन्तिम पटक प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। ओली आगामी फागुनमा ७१ वर्ष लाग्दैछन्।
त्यसो त ओलीसँगै १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका उपाध्यक्ष भीम रावल पनि नेतृत्व या पदाधिकारीमा पुग्न अन्तिम अबसर भएको छ। हाल उनको उमेर ६६ रहेको छ। ११औँ महाधिवेशनसम्ममा उनी ७० वर्ष कटिसकेका हुनेछन्।महिला प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने ६७ वर्षीया अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि पदका लागि ओलीको मुख ताकेर बसेकी छिन् ।
यस्तै महासचिव ईश्वर पोखरेलको लागि पनि यो अन्तिम मौकाा हो । उनी पनि अहिले ६७ वर्षका भइसकेका छन्।संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ यस पटक उनी पदाधिकारीमा अटाउन सकेनन् । नेम्वाङ पनि ६९ वर्षका पुगिसकेका छन्।
अमृत बोरा र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका लागि पनि यो नै अन्तिम अवसर भएको छ । ज्ञवाली हाल ६८ वर्षका भएका छन् । निष्क्रिय रहेको ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था फेरि ब्युँताएको हो।